इभ्यानोभो तालाब कहाँ? को इभ्यानोभो मा मत्स्य पालन तालाब
, शहर देखि उम्कन शान्ति र शान्त आनन्द, केही ताजा हावा प्राप्त - यो हरेक नागरिक को सपना छ। जहाँ तपाईं लामो समय को लागि पर्याप्त छ ऊर्जा को एक बढावा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भ्रमण, टाढा मुलुकमा यात्रा गर्न आवश्यक छैन किनभने रूस यी paradises मा धनी छ। यी ठाउँहरू, कुनै संदेह छैन, वोरोनिश क्षेत्र मा स्थित छ इभ्यानोभो तालाब श्रेय गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक मनोरञ्जन, माछा मार्ने, र हप्ताको समयमा र सप्ताहन्तमा मा यहाँ पठाइएको को प्रशंसक सयौं।
को वोरोनिश क्षेत्रमा मत्स्य पालन
वोरोनिश क्षेत्र यसको सुन्दर प्रकृति क्षेत्रहरु, ponds, विविध माछा को धनी को लागि प्रसिद्ध छ। माछा मार्ने उत्साही वरपरको क्षेत्र बाट, तर पनि सबै रूस भन्दा मात्र होइन यहाँ आउनुहोस्। ponds को सबै भन्दा साधारण बासिन्दाहरू, यहाँ नदी को आक्षेप, ब्रीम, crucian आक्षेप, Pike, घाँस आक्षेप, चाँदी आक्षेप छन्। माझिहरु अक्सर आश्चर्य - जहाँ राम्रो ठाउँ मा जानुहोस्। को वोरोनिश क्षेत्र अब धेरै संचालित मा भुक्तानी ponds, यो पानी को शरीर उचित हेरविचार, लगे मोजा संग समायोजित छ लागि माछा मार्ने, सफल हुनेछ भन्ने एक ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यी ठाउँहरू Ivanovskii तालाब भन्छिन्। यो पोखरी जनसंख्याको बीचमा धेरै लोकप्रिय छ। सुव्यवस्थित माछा मार्ने पर्यटन अझ हालैको वर्ष र थप माछा मार्ने उत्साही मा आकर्षित गर्छ। तपाईं स्थान इभ्यानोभो तालाब (Kommunarka), जहाँ माछा मार्ने पनि भुक्तानी छ भ्रममा छैन, यहाँ आउन इच्छा छ भने, यो मास्को टाढा छैन। र आज हामी वोरोनिश क्षेत्रमा जाँदैछन्।
इभ्यानोभो तालाब Emancha 2nd (Khokholsky जिल्ला)
उहाँले सबै भन्दा राम्रो भुक्तानी तालाब वोरोनिश क्षेत्र रूपमा मान्यता छ। को तालाब एक सुरम्य ठाउँमा बाहिर फैलाउन 35 हेक्टरमा मोजा। यहाँ तपाईँले कुनै पनि मौसम मा ड्राइव गर्न सक्छन्, सडक को तालाब सम्म छापिएको छ। को तालाब नजिकै त्यहाँ एक विशाल कार पार्क, राति गार्ड सहित छ जो छ। रात प्रकाश संगठित छ मा, बिजुली किनारमा गर्न। तट साथ सबै माछा मार्ने लागि सहज स्थान संग सुसज्जित छन्। विश्राम र आराम को लागि 6-12 मान्छे, माछा मार्ने lodges, केबिन, गरम राउन्ड सबै वर्ष हो, जसमा सुसज्जित बलौटे समुद्र तट लागि gazebos निर्माण गरिन्छ। 60 मान्छे को लागि इनडोर काठ पाल तपाईं ठूलो उत्सव (विवाह, वार्षिकोत्सव) संगठित गर्न अनुमति दिन्छ। यहाँ तपाईं एक कर्पोरेट छुट्टी, परिवार र दुई को लागि पनि रोमान्टिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। गार्ड को तालाब शान्ति र शान्त मा सुनाउँछन्। नजिकैको पानी पिउने एउटा वसन्त छ। इलाका नियमित किर्नाले विरुद्ध उपचार। सुरम्य प्रकृति, सफा, राम्रो तरिकाले कायम तालाब पछि, तपाईं शान्ति र शान्त यस संसारमा रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ।
सबै उपस्थित लागि माझिहरु र अन्य गतिविधिहरु बीच इभ्यानोभो तालाब प्रतियोगिताहरु प्रत्येक वर्ष। Raffled पुरस्कार, घटनाहरु को एक किसिम आयोजित। स्मरणीय माछा मार्ने लागि प्रतीक्षा पानी मा विश्राम र सान्त्वना प्रेम। त्यहाँ नियमित छन् को तालाब मोजा। माछा को घनत्व कुनै पनि मौसम र कुनै पनि मौसम मा एक nibble प्रदान गर्दछ। माछा Fauna निम्न प्रतिनिधिको हो: आक्षेप, crucian आक्षेप, Pike, घाँस आक्षेप, चाँदी आक्षेप, मछली, अड्डा, Pike, Catfish, र sturgeon। सेप्टेम्बर को अन्त मा आक्षेप को2टन जारी तालाब मा जाडो माछा मार्ने पूरा गर्नको लागि। वसन्त पनि replenishment जलाशय रिजर्व आयोजित छ। यहाँ आउन सबै, मात्र आनन्द संग यो स्थानको बारेमा बोल्न भनेर एक सफल, सहज बाँकी हरेक प्रयास सुनिश्चित गर्न। माछा मार्ने को प्रशंसक कहिल्यै शिविरमा सूप को richness बिना हुनेछन् र यहाँ नछोड खाली-हाथ। को दिग्गज-लामो आक्षेप संग यहाँ लिइएको एक फोटो कुनै पनि मछुवा गर्व छन्।
इभ्यानोभो तालाब कहाँ?
को तालाब प्राप्त गर्न कठिन छैन। खण्डमा कुनै पनि मौसम मा खुला छ। Rubble संग strewn को तालाब सडक सम्म। बाटो सम्झैताको शिखा मार्फत निहित। सबै समय, Repyevka तिर मुख्य सडक लिन। एक गहिरो Khokhol लग मार्फत र तपाईंले साइन देख्ने हिल मा लगभग 20 मी पछि ड्राइभिङ पछि "बायाँ पोखरी।" सडक को 2nd Emancha को बन्दोबस्त गर्न नेतृत्व गर्नेछन्। छापिएको सडक बिस्तारै रोडा जान्छ। त्यसैले - को Ivanovsky तालाब गर्न।
सुक्खा मौसममा, तपाईं मार्ग Ostrogozhsk मा जान सक्नुहुन्छ। साइन "Ivanovka" रोल सम्झना छैन। हामी तपाईंलाई5मी चलाउनु आवश्यक औंठी प्राइमर मा सही सूचक "तालाब" को लागि देख, को डामर को अन्त पुग्यो र त्यहाँ छन्। तपाईं एक नेभिगेटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने इभ्यानोभो तालाब प्राप्त गर्न सक्छन् - Kommunarka। भ्रमित हुन छैन! आफ्नो दिशा - को वोरोनिश क्षेत्रमा।
प्रत्येक मछुवा एक पदक आक्षेप ठूलो फसाउन धेरै गर्व छ। यस्तो मौका तपाईं इभ्यानोभो तालाब (Emancha 2nd, Khokholsky जिल्ला) दिनेछु। हरेक वर्ष यो पोखरी zaryblyayut आक्षेप, र हरेक शिल्पी राम्रो शिकार पकड गर्न सक्नुहुन्छ।
Karp undemanding, 35 डिग्री तापमान अप सामना गर्न सक्छन्, यो धेरै reservoirs मा पाइन्छ।3वर्ष यौन परिपक्वता, ठूलो आकार पुग्छ। जहाँ पानी स्थिर वा मध्यम समयमा छ गहिरो र व्यापक क्षेत्रहरू लागि आक्षेप वासस्थानमा खोजी। तल मड्डी वा नरम माटो, तर चट्टानी छैन रुचि। Karp न्यानो पानी सामान्यतया गहिराई मा राखिएको छ रुचि।
के आक्षेप फसाउन? आहारा आवश्यक राम्ररी Fed र सुगन्धित हुनुपर्छ। अनुभवी माझिहरु जमीन पोलेको बीउ संग धमाकेदार मकै भड्काए। अर्को तरिका - जमीन बीउ पीठो र मिश्रित चारा संग मिश्रित गर्दै छन्। तपाईं बस मकै पकाउन सक्छ, यो कुनै पनि स्वाद गर्न चीनी थप्नुहोस्।
धनी आक्षेप तालाब इभ्यानोभो। माझिहरु को आफ्नो धनी कैच को फोटो अक्सर फोरम मा फैलाउन छन्। यो "बाली" अक्सर को (600-700 ग्राम उदाहरणका सामान्य वजन) एक नम्बर लाग्छ। हुनत त्यहाँ आक्षेप र3किलो सम्म छन्। को Emanche-2 भ्रमण गर्ने माझिहरु को समीक्षा, यी ठाउँहरू माछा को richness पुष्टि गर्छ। कसैले पनि तालाब फिर्ता परिवर्तन गर्न, आफ्नो रिलीज रहेको छ।
आक्षेप देखि प्रारम्भिक वसन्त देखि nemerenno भोक जगाउन सुरु, र उहाँले प्रत्यक्ष चारा मा जान इच्छुक थियो: कृमि, maggots। एक विज्ञान - पक्रने crucian। धान्य, रोटी, अनाज - यो गर्मी मा तरकारी प्याक थप pecks छ। केही लालच crucian, सन वा सन तेल, वेनिला थप्दा। क्याच आक्षेप मात्र व्यापार र prawns गर्न छाँटकाँट एक कृमि, - तिनीहरूले thawed छन् धेरै टुक्रा मा कटौती र हुक मा धक्का। एक जलाशय सीमाहरु मा, reeds मा आक्षेप रक्षा। गहिराई जहाँ यो अब जांच गर्न भने, निरन्तर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
घाँस आक्षेप यो भारी छ, आक्षेप परिवार पर्छ। कुनै पनि मछुवा शुभकामना - यो भेट्टाउने। - 32 किलो वजन; यसको लम्बाई 120 सेमी छ। तर पनि साना नमूनहरुको आनन्द माछा मार्ने कुनै पनि प्रेमी छन्। इभ्यानोभो तालाब कहिलेकाहीं यस्तो उदाहरणहरु यसको आगंतुकों छक्कै पर्छन्।
को फ्लोट प्रणालीमा घाँस आक्षेप रहनुहोस्, तर यो आक्षेप लागि सामान्य गियर भन्दा बलियो परिमाण को आदेश हुनुपर्छ। प्रयोग चारा समर्थित वा उसिनेर मकै रूपमा, flavorings थपिएका छन्। क्याच घाँस आक्षेप साँझ सूर्यास्त गर्न सूर्योदय देखि वसन्त वा शरद ऋतु मा शान्त घाम मौसम मा उत्कृष्ट छ। वरिपरि निरपेक्ष मौन, वा घाँस आक्षेप फिड स्टप हुन र अर्को thicket जाने गर्नुपर्छ। तपाईं तटीय thickets मा दु: ख छैन भने, तपाईं कहाँ त्यहाँ बिरुवाहरु केही रहलपहल छन् नेट पुग्छ, मा जाने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। हरियो मटर कोसा, ovaries ककडी, बच्चा मकै, क्लोभर, vetch - लुरे घाँस आक्षेप कोमल, जवान वनस्पति हुन सक्छ। को ठहराव शैवाल सदृश कि हुक हरियो सूत्रहरू संलग्न गर्न सकिन्छ। आक्षेप वासस्थानमा हुनेछ धुनमा वा हांस सदृश कि अस्थायी मलको एक भन्दा बढी प्रशस्त हुन सक्छ। बिरुवाहरु आक्षेप को मुख्य खाना हो, त्यसैले यो झाडी नजिक हुनुपर्छ खोज्न।
ब्रीम - आक्षेप को प्रतिनिधि। जवान महिला ब्रीम भनिन्छ, सबैभन्दा पुरानो, सबै भन्दा ठूलो - विभिन्न तरिकामा (ब्रीम, kilyak, rudd) मा सबै क्षेत्रहरु मा। ब्रीम र इभ्यानोभो तालाब (Emancha 2nd, Khokholsky जिल्ला) को लागि प्रसिद्ध। फोटो माझिहरु राम्रो क्याच यहाँ के संकलित सकिन्छ प्रमाणित।
तपाईं ब्रीम लागि डेरा डाले जाँदैछन् भने, तपाईं35 मा यो त एक कृमि पहिलो सक्रिय ब्रीम खानको, र त्यसपछि अचानक यो indifferent बन्न कि हुन्छ देखि फँसाना चाहे केही प्रकार को हेरविचार गर्नुपर्छ, यहाँ आवश्यक सुगंधित चारा, रोटी, आटा स्विच गर्न छ। केही माझिहरु हुक कीडे मा एक ठाउँमा, वा केही maggots तिनीहरूलाई भेदी, 5-6 ले लगाउने। आटा सानना एक ऊन थप्दा, हुक विस्तार बन्द तर्साउन त सजिलो, आवश्यक छ। प्रत्येक मछुवा आफ्नो रहस्य केही चारा को आवेदन मा बताउन सक्छ।
ब्रीम समूहहरू, धेरै स्मार्ट र सावधान राख्छ। यो गहिरो ठाउँ र thickets रुचि। गहिराई मा Wintering।
पाइक - बाचेको व्यक्ति। त्यो भाग्यमानी हो भने, 15 वर्ष को उमेर पुग्न सक्दैन। यसको वजन 32 किलो पुग्यो। को तालाब इभ्यानोभो आउनुभएका माझिहरु, ठूलो नमूनों फसाउन आफ्ना सबै कौशल प्रयोग गर्नुहोस्। यो predator फोटोहरू एकदम प्रभावशाली छ। एक पदक प्राप्त गर्न प्रबन्धन जो कोहीले, त्यसपछि आनन्द संग माछा पकडने बारेमा बताइएको छ। जहाँ रानी यो पोखरी बसोबास स्थानहरू त? पाइक जहाँ शैवाल को धेरै, कुनै पनि उत्सुक मछुवा चाल धेरै उनको बाहिर फसाउन थाह तटीय स्थानहरू प्रेम गर्नुहुन्छ। Spinnings अक्सर turntables प्रयोग, यो ठहराव को पक्रने क्षमता छ। तिनीहरूले कुनै पनि मछुवा समावेश गर्नुपर्छ। कसैले सफलतापूर्वक विशेष गियर प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष चारा मा एक पाइक परिहाल्छ।
तपाईं जहाँ तपाईं, आराम गर्न सक्छन् पाठ्यक्रम, जाने माछा मार्ने इभ्यानोभो तालाब आउन भने, ताजा कान पकाउन सुनिश्चित। को धुवाँ, आगो, एक गेंदबाज टोपी संग - यो देहात बाहिर प्राप्त गर्न लायक छ। त्यसैले, सरल नुस्खा। माछा बस हुक बन्द, बिल्कुल ताजा हुनुपर्छ।
ठूलो माछा (Pike, Catfish, आक्षेप) - 1 किलो।
परिवर्तन - 0.5 किलो।
प्याज (टाउको 2)।
अजवाइन, साग (मूल)।
नुन र मरिच।
वोदका - 50 ग्राम
पहिले तपाईं सानो माछा र ठूलो बोसो टाउको देखि शोरबा फोडा गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि माछा हटाउन। ठूलो टुक्रा कटौती र शोरबा मा राख्नु। घन आलु, गाजर, र प्याज छल्ले मा कटौती। एक माछा मार्ने चाल को अन्त मा - तपाईं वोदका को 50 ग्राम थप्न आवश्यक, यो बाक्लो र माछा को हड्डी को गन्ध बन्द लड्न नरम हुनेछ मदत गर्नेछ। वर्तमानमा, कान कुनै पनि अनाज थप्न छैन। को रक्सी खींचना हार्ड उबला छैन निश्चित गर्नुहोस्। , गर्मी हटाउन यो लगभग 15 मिनेट लागि बनाउँने दिन, कान तयार छ! आफ्नो छुट्टी र भोक आनन्द लिनुहोस्!
सुरक्षित माकुरा Araneus
हुमिङबर्ड बाज-किरा - कीरा "हुमिङबर्ड"
रूस को दुर्लभ बिरुवाहरु: फोटो
बोट र चेल्याबिन्स्क क्षेत्रको जनावर: फोटो र विवरण। को चेल्याबिन्स्क क्षेत्रको लाल बुक
Yarrow कहाँ बढ्छ? प्रजाति विवरण र फोटो बिरुवाहरु
क्रेन पहनाया। यो चरा जीवन जस्तै र कहाँ देखिन्छ?
सफल व्यवसायी अन्नासास्सा जडोरिना र उनको नयाँ परियोजनाहरु
बङ्गाल काट्नेहरूलाई के भन्नु हुन्छ: दायाँ मेनु
खैरो लुगा लगाउने कसले खैरो कपडा लगाउनेछ?
के - बारुला कुकुर bitten छ? पहिलो सहायता
रूसी शहर मा आगो सुरक्षा को संग्रहालय। आगो सुरक्षा को इतिहास
पूर्ण स्क्रिनमा खेल कसरी फैलिनु गर्न? निर्देशन
Borisova Ekaterina: मौसम को जीवनी सदस्य 15, "psychics को लडाई"
सेन्ट निकोलस सुरुचिपूर्ण Residence 4: * फोटो र समीक्षा
Lymphocytes वृद्धि neutrophils ड्रप - वा कसरी विश्लेषण decipher गर्न?
लोशन, क्रीम, salicylic एसिड: ingrown hairs लागि बाल हटाउने उपाय पछि। कपाल हटाउने को विधिहरू
मुख्य बुँदाहरू: कार्यक्रममा थप्न वा हटाउने